यस क्षेत्रलाई आयुर्वेद हव बनाउने : निमित्त निर्देशक दाहाल - साक्षी खबर यस क्षेत्रलाई आयुर्वेद हव बनाउने : निमित्त निर्देशक दाहाल - साक्षी खबर
असार २३, २०७८ | १२२० पटक पढिएको
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ बिजौरी स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले पछिल्लो समयमा बिरामीहरुको मन जित्दैछ । सर्ने खालका संक्रामक रोगको उपचारभन्दा धेरै नसर्ने रोगहरुको उपचारमा बढी विश्वास गरिएको चिकित्सालय बिजौरीमा पछिल्लो समयमा आधुनिक प्रयोगशाला, रेडियोलोजी सेवासँगै पायल्स र फिस्टुलाको क्षारसूत्रबाट शल्यक्रिया समेत गर्दै आएको प्रादेशिक आयुर्वेदीय अस्पतालमा अहिले दाङ जिल्लाका मात्र नभएर लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका बिरामीहरुको समेत आकर्षण बढ्न थालेको छ । वर्तमान परीप्रेक्षमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिप्रतिको विश्वास र आकर्षणसँगै अस्पतालमा उपलब्ध सेवाहरुका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीका निमित्त निर्देशक डा. गोकर्ण दाहालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
अहिले यस चिकित्सालयमा भइरहेका नयाँ उपचार पद्धतिका बारेमा बताइदिनुस् न ?
– सर्वप्रथम त मैले यो अस्पतालमा निर्देशकको भूमिकामा काम गर्न थालेको करिब एक वर्ष पुग्नै थालेको जानकारी गराउन चाहन्छु । यसबीचमा अस्पताललाई संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट समेत उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भएको छ । कम्तिमा २३ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधीहरु अस्पतालले बिरामीहरुलाई आवश्यकता अनुसार निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने डायग्नोसिसका सवालमा पनि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति भइसकेको छ ।
प्रयोगशालामा अत्याधुनिक मेसिनबाट सुगरको परीक्षणदेखि थाइराइड फङ्सन टेस्ट समेत भइरहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । त्यससँगै हामीले यो वर्ष रेडियोलोजी सेवा अन्तर्गत डिजिटल एक्स–रे, मानव शरीरका हरेक अङ्गहरुको भिडिओ एक्स–रेलगायतका परीक्षणहरु गर्दै आएका छौँ । मुटुको इसिजी सेवा पनि अस्पतालमा उपलब्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । अब हामी चाँडै नै मानव शरीरलाई स्फूर्तिलो र निरोगी बनाउन निःशुल्क रुपमा नागरिक आरोग्यशालाको निर्माण पनि गर्दैछौँ । अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको हामीले आयुर्वेदिक औषधीको स्थानीय स्तरमै निर्माण गरी उपयोग गर्न औषधी निर्माणशालाको समेत काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।
निर्माणशाला र नागरिक आरोग्यशालाको सञ्चालनको कुरा गर्नुभयो, के–कस्ता कामहरु गर्ने उद्देश्यले यी काम भइरहेका छन् ?
– हो, हामीले संघीय सरकारको ३ करोड रुपैयाँको लागतमा औषधी निर्माणशालाको निर्माण करिब–करिब सम्पन्न गरिसकेका छौँ । अब आउने आर्थिक वर्षदेखि नै यसमा औषधी निर्माणको काम सुरु हुने तयारी भइरहेको छ । स्थानीय स्तरमै उपलब्ध जडिबुटीबाट आयुर्वेदिक औषधी उत्पादन अब बिजौरीमै हुनेछ । गुड म्यानुफ्याक्टर प्राक्टिस (जिएमपी)का आधारमा यो निर्माणशालामा औषधीहरु निर्माण हुनेछन्, ता कि यसले गुणस्तरीयताको सुनिश्चितता गर्न सकोस् । यसको उद्देश्य यहाँ उत्पादन भएका औषधीहरु लुम्बिनी प्रदेश मातहतका सबै आयुर्वेद अस्पताल र चिकित्सालयहरुमा उपलब्ध गराइनेछ ।
हाल उपलब्ध आयुर्वेद विधाका चिकित्सा सेवाका विषयमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
– सबैभन्दा पहिले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिका विषयमा बुझ्न जरुरी छ । सर्ने खालका संक्रामक रोगहरुको उपचारका लागि भन्दा नसर्ने खालका दीर्घरोगका लागि आयुर्वेद उपचार पद्धति बढी प्रभावकारी मानिन्छ । आयुर्वेद चिकित्सा रोग निको बनाउनेभन्दा पनि रोग कहिल्यै नफर्कने गरी सन्चो बनाउने पद्धतिका रुपमा पनि विश्वास गर्न उपयुक्त हुनेछ ।
अहिले अस्पतालमा सबैभन्दा बढी आकर्षक सेवा भनेको क्षारसूत्रबाट पायल्स र फिस्टुलाको शल्यक्रिया नै हो । यस अघि क्षारसूत्रबाट शल्यक्रिया तालिमप्राप्त चिकित्सकहरुबाट हुँदै आएकोमा अहिले हाम्रो अस्पतालमा आयुर्वेद शल्यचिकित्सकको समेत व्यवस्थापन भइसकेको छ । क्षारसूत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकबाट क्षारसूत्रबाट शल्यक्रिया भइरहेको पनि म यहाँ सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
यसैगरी अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन नसकेका औषधीहरु किन्नका लागि पनि आफ्नै अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अस्पताल फार्मेसीमा औषधी हेरेर कम्तिमा ३० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म छुट दिइने व्यवस्था समेत अस्पताल फार्मेसीमा उपलब्ध छ । ग्राहकले यो छुट सेवा मागिरहनुपर्ने छैन । बिलिङ हुँदा नै स्वतः छुट हुनेछ । साउन १ गतेदेखि आफ्नै अस्पताल फार्मेसी सञ्चालनमा आउनेछ ।
आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा पञ्चकर्म उपचार पद्धतिका विषयमा निकै चर्चा हुन्छ, के हो पञ्चकर्म उपचार पद्धति बताइदिनुस् न ?
– हो, हामीकहाँ पनि पञ्चकर्म उपचार पद्धति सुरु भइसकेको यसै अनलाइनमार्फत् आम पाठक तथा नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । पञ्चकर्मलाई व्यवस्थित गर्न आधुनिक उपकरणहरु आइसकेका छन्, जुन स्टलको प्रक्रियामा छन् । पञ्चकर्म सेवालाई व्यवस्थित गर्नका लागि पञ्चकर्म विज्ञलाई पनि करारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढ्नेछ । मलाई लाग्छ, साउनदेखि नै पञ्चकर्म विज्ञ नियुक्त भई सेवा सञ्चालनमा आउनेछ ।
अर्को आधुनिक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमै पर्ने रक्तमोक्षण पद्धति पनि सुरु भइसकेको पनि यसै अनलाइनमार्फत् आम नागरिकलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । मानव शरीरको जुन भागमा विकार छ, त्यहाँ एउटा प्रजातिको जुकालाई टोकाएर त्यहाँको विकार बाहिर निकालिन्छ । आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिमा रक्तमोक्षण प्रविधि पनि सफल उपचार पद्धति मानिँदै आएको छ । त्यसका लागि जुकाखेती पनि अस्पताल परिसरमा सुरु भइसकेको छ । यहाँ सञ्चालनमा आएको अर्को पद्धति भनेको मलद्वारमा जडिबुटीजन्य औषधी राखेर पनि शरीरमा रहेका विभिन्न विकारहरुलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ ।
जसले गर्दा रोग निको भएर कहिल्यै फेरि फर्कन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । पञ्चकर्मका यी सबै विधि र पद्धतिहरु आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि संघीय सरकारबाट सेवा सुदृढीकरणका लागि एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ आइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट पनि १ करोड बजेट विनियोजन भइसकेको छ । यसकारण पनि बिजौरी आयुर्वेद अस्पतालमा आउने बिरामीले अब नेपाल सरकारले निःशुल्क गरेका २३ प्रकारका आयुर्वेद औषधीहरु निःशुल्क रुपमा ढुक्कसँग पाउनेछन् । औषधी किन्नुपर्ने अवस्था अब अत्यन्तै न्यून हुनेछ ।
अन्त्यमा समस्याका विषयमा पनि केही बताइदिनुस् न ?
– हो, समस्या पनि धेरै छन् तर पछिल्लो समयमा खड्किएको समस्या भनेको बिजौरी स्थित आयुर्वेद अस्पतालले अहिलेसम्म दरबन्दी अनुसार चिकित्सक पाएको छैन । विशेषज्ञ चिकित्सकको एकदमै आवश्यकता खड्केको अवस्था छ भने कार्यालय सहयोगीको आवश्यकता पनि उत्तिकै खड्केको अवस्था हो । स्त्री तथा प्रसूती रोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ तथा कार्याचिकित्सकको पनि दरबन्दी अनुसार व्यवस्थापन हुनसकेको छैन । अझै दुर्भाग्यको कुरा के भने अस्पतालले स्थापनाकालदेखि नै फुल निर्देशक पाउनसकेको छैन । निमित्त निर्देशककै भरमा चलाउनुभन्दा दरबन्दी अनुसार ११औँ तहको निर्देशक अस्पतालमा आउनसके सेवामा थप प्रभावकारी हुने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।